Huawei Mate 30 Pro ga - abịa na ese foto azụ ise | Gam akporosis
Huawei wepụrụ iwu mgbe ọ malitere ya P20 Pro nwere sensọ igwefoto azụ atọ na mmalite nke afọ gara aga. Ntọala igwefoto ngwaọrụ a guzosiri ike na benchmark DXOMark dị ka ntọala igwefoto kacha mma, yana 9 Galaxy Note, nke iPhone X na ndị ọzọ na-enweghị ike iweda ya.
The feat e ugboro ugboro na Mate 20 Pro, nke nwekwara ihe ntanetị igwefoto atọ na azụ. Ugbu a, ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ ọ bụ naanị gbasara iwepụta ihe - anyị na-ekwu okwu ese foto ise na-abịa n'ihu Mate 30 Pro. Ihe ngosi banyere nke a sitere n'ụdị ntinye akwụkwọ sitere n'aka Huawei maka okwu ama ama edepụtara na Nchịkwa Ihe Ọmụma nke Ọchịchị nke Mba.
The leaked ama ikpe na-atụ aro na na Huawei Mate 30 Pro ga-enwe ntọala penta-igwefoto. Igbe ahụ nwere akara cutout ka ukwuu na ọkara dị elu, nke pụtara ìhè karịa nke Mate 20 Pro. Cheta na ọdụ ikpeazụ a gụnyere igwefoto azụ atọ na ọkụ ọkụ. Nnukwu ihe nkwụsị na ikpe ekwentị na-egosi na Huawei Mate 30 Pro ga-enwe ihe mmetụta 5 n'azụ ya na ọkụ ọkụ. Agbanyeghị, anyị ejighị n'aka ma ikpe patented ahụ ọ dị maka ekwentị a, mana ọ bụ n'ezie otu n'ime ọkọlọtọ Huawei n'afọ a. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, Nwunye 30 Pro ga-esonye na Nokia 9, nke a na-atụ anya na ị ga-egosipụta ntọala penta-igwefoto.
Nkọwa ndị ọzọ nke ngwaọrụ na-abịanụ nke enwere ike ị nweta site na smartphone smartphone patent gụnyere enweghị akara mkpịsị aka na azụ. Nke a na-egosi na ngwaọrụ a nwere ike ịgụnye ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ngosipụta.
Ekwentị ahụ nwekwara bọtịnụ ike na rocker olu dị n'akụkụ aka nri. Na okpuru ya bu uzo USB Type-C, yanakwa grills maka okwukwu si n’iru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei Mate 30 Pro ga-abịa na ese foto ise n'azụ, dị ka ngwa ntinye akwụkwọ si abanye
Samsung na-ewebata Exynos Processor Ezubere maka Ugbo